Ndị mmeri Mega Moolah, ndị akụkọ, akụkọ ihe mere eme - cheapinternetsecuritysoftware.com
A na-ahụta Mega Moolah dị ka otu n’ime oghere jackpot kacha elu na ntanetị. Mepụtara Microgaming ma ama maka ịkwụ ụgwọ ụfọdụ onyinye kachasị na akụkọ ntolite, igwe ịgba agba ise a ejirila oké ifufe bulie ụlọ ọrụ ahụ.
N’ezie, n’agbanyeghi na oghere ndị dị na Mega Moolah dị ogologo oge, ọ ka na-enye nkwanye ugwu ebe ọ bụla achọtara ya. Dị nnọọ ka Super Mario ga-abụ egwuregwu vidio kpochapụla, Mega Moolah ga-abụ ebe ebighi ebi dị ka otu n’ime oghere ụwa.
N’ihi gịnị? Nwere ike. Egwuregwu a na-abawanye ọdọ mmiri na-arịwanye elu na-arịwanye elu, dị ka oghere jackpot ọ bụla na ntanetị. Agbanyeghị, ọ bụ nha na nkwụ ụgwọ ya na-eme ka Mega Moolah bụrụ egwuregwu.
The History Of Mega Moolah Ohere mepere
Mega Moolah mepụtara Microgaming wee bido ya n’afọ 2006. Ọ bụghị nke mbụ na-aga n’ihu jackpot oghere online. Mana o mere ka ihe kpatara nsogbu. N’adịghị ka ọtụtụ ndị bu ya ụzọ, Mega Moolah na-enye jackpots anọ karịa otu. Obere, Minor, na Major jackpots bụ nkwado na Mega Jackpot na-achọsi ike.
Nke ahụ apụtaghị ịsị Mini, Minor, na Major abaghị uru ma ọ bụ abụọ, ha bụ. N’ezie, mkpụrụ ha bụ (ụkpụrụ mmalite ha) sitere na € 10 ruo € 10,000. Yabụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchefu nnukwu, enwere uru bara ụba iji merie. Agbanyeghị, ọ bụ Mega jackpot onye ọ bụla ga-elekwasị anya mgbe ha na-egwu egwu Mega Moolah.
Mkpụrụ ego maka Mega Jackpot bụ obi dị € 1 nde, mana enwere egwuregwu a karịa jackpot na-aga n’ihu. Mgbe Microgaming kere egwuregwu a, ebumnuche bụ ime ka ọ bụrụ ihe ntụrụndụ dịka ọ na-akwụghachi ụgwọ. Nke a emeela ka ndị okike ndị ọzọ nwee mmụọ kemgbe ọtụtụ afọ, ma, taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu jackpot niile na-enye karịa ọdọ mmiri na-aga n’ihu. Mgbe ị na-egwu jackpot ohere mpere na ntaneti, dịka Divine Fortune na Diamond Joker, mpịakọta efu, anụ ọhịa, na bonus dị oke mkpa dị ka onyinye kacha elu.
Na Mega Moolah, ihe a na-eme na mbara ọzara Africa. N’ebe dị anya ị ga-ahụ ka anyanwụ na-ada mgbe ụda okike na-ada. Ilegide gi anya site na uzo ise na 25 paylines bu ihe nkedo nke anumanu ndi ozo. Onye obula nwere ihe nlere anya nke mmadu na anya ha nke mere ka o doo gi anya na nke a bu uzo nkpori. Ọbụna tupu i mee ka jackpots ahụ dị elu, enwere ihe na-aga n’ihu ịgwa gị na ntụrụndụ dị oke mkpa dị ka ego nrite. Nke ahụ, n’ọtụtụ ụzọ, bụ ihe mere Mega Moolah ji nwalee oge.
Etu esi egwu Mega Moolah Slots Online
Nwere ike nzọ n’etiti € 0,25 na .2 6,25. Chọta ebe dị ụtọ maka ọnụahịa maka ntụgharị bụ ihe gbasara ịhazigharị mkpụrụ ego na ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ego ị na-akụ n’ego ọ bụla. Ihe dị mkpa iji rịba ama bụ na enwere paylines 25. Yabụ, agbanyeghị ịhọrọ mkpụrụ ego gị, cheta na ego ị ga-egwu kwa ntụgharị ga-amụba site na 25.
Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị họrọ otu mkpụrụ ego nha nke € 0.10 na otu mkpụrụ ego kwa akara, ego kwa atụ ogho ga- 10 0.10 x 25 = € 2.50. Inwe ike idozi ihe n’ụzọ dị otú a pụtara na ị nwere ike ịkụ nzọ ziri ezi na ọnụ ọgụgụ kwekọrọ na nha nke bankroll gị.
Ozugbo i doziri nzọ gị, oge eruola ka ị kpọọ. A na – eme njikọ iji merie akara atọ ma ọ bụ karịa
Ihe akara kaadị (10, J, Q, K, A) AntelopeThe ZebraThe Giraffe Buffalo (kwekọrịtara abụọ ma ọ bụ karịa iji merie) Elephant (dakọtara abụọ ma ọ bụ karịa iji merie) Ọdụm (akara ọhịa na jackpot)
Dị ka anụ ọhịa, ọdụm nwere ike dochie anya akara ndị ọzọ niile belụsọ ikposa (enwe). Ọzọkwa, n’etiti ọdụm abụọ na ise ga-emeghe ihe nrite ruru 15,000x bet nzọ gị. Iji rụọ ọrụ ego nke ihe nrite, ị ga-eme ka uru nchikota bawanye site na nha nke mkpụrụ ego gị na ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ego kwa ụgwọ.
Na mgbakwunye na nkwụnye ụgwọ a kwụrụ ụgwọ, oghere Mega Moolah na-enwekwa ego nkwụnye ego n’efu. Site na ịgbanye n’ime atọ ma ọ bụ karịa gbasasịa, ị ga-enweta ihe nrite ego ruru 100x nzọ gị dum. Mgbe nke ahụ gasịrị, etinyere na akaụntụ gị, ị ga-enweta ihe ruru 15 free spins. Ihe ọ bụla ị meriri n’oge bonus ga-aba ụba x3.
Agbanyeghị, ịgọnahụ isi ihe bụ ikike nke atụmatụ asaa.
Ihe dị egwu banyere egwuregwu a bụ na ị nwere ike merie jackpot na-aga n’ihu na nha ọ bụla. Ọ bụ ezie na iwu egwuregwu na-ekwu na nnukwu nzo nwere ike ime ka o nwekwuo ohere nke ịkpalite egwuregwu jackpot, enweghị nkwa. Gbado anya na ịkụ ego ole ị nwere nke ọma ma mara na ị ka nwere ohere ịkpalite ego jackpot.
18+ | begambleaware.org | Gba chaa chaa nwere ike ịbụ ihe na-eri ahụ, biko gwuo egwu. Okwu & Ọnọdụ dị.
Olee Otú M Ga-emeri Mega Moolah Ohere mepere Jackpot?
Ihe ị ga – eme iji merie jackpot Mega Moolah bụ egwuregwu. Enweghị ụzọ aghụghọ pụrụ iche ma ọ bụ atụmatụ ịchọrọ ịmeghe. Egwuregwu jackpot nwere ike ịmalite na aghara. Ọ bụrụ na ọ mee, a ga-akpọrọ gị na Mega Moolah Jackpot Wheel. Akụkụ ọ bụla nke wiil ahụ na-anọchite anya otu n’ime ihe ndị a:
Obere Jackpot – Amalite na € 10Minor Jackpot – Amalite na € 100Major Jackpot – Malitere na € 10,000Mega Jackpot – Amalite na € 1 million
Enwere akụkụ ndị ọzọ a raara nye obere jackpots. Otú ọ dị, n’ihi na nke a bụ ihe nkwụnye ụgwọ na-aga n’ihu, ka ndị egwuregwu na-egwuri egwu, ihe nrite na-eto eto.
Onwere otu uzo enyere na Mega Jackpot, nke ga-aba uru opekata mpe onu ogugu asaa. Ebe ọ bụla wiil ahụ kwụsịrị, nke ahụ bụ ihe nrite ị meriri.
Moolọ Nzukọ Mega Moolah: N’ime afọ iri nke ndị mmeri
Mega Moolah nwere ikike ịkwụ ụgwọ karịa oghere jackpot ndị ọzọ. Mkpụrụ ego nke € 1 nde dị elu karịa nkezi, otu n’ime ihe mere egwuregwu a ji gbajie ndekọ ụwa ugboro abụọ maka mmeri kachasị.
Nkọwa Mega Moolah Winner Stats:
Egwuregwu ahụ n’onwe ya akwụla ụgwọ karịa € 950 nde kemgbe ọ malitere. N’oge ahụ, a na-edozi ya ma tọgharịa ihe ndekọ maka nnukwu nkwụnye ụgwọ na ntanetị n’ịntanetị akụkọ ihe mere eme mbụ Mega Moolah jackpot kụrụ na 2007. Otu afọ mgbe mmalite ya, egwuregwu ahụ kwụrụ ụgwọ kachasị elu karịa € 4 nde. onye mmeri ọzọ pụtara tupu ndị egwuregwu atọ kụrụ jackpot na 2009. Otu iyi nke ndị mmeri na-esochi maka afọ anọ sochirinụ, tupu eburu ihe na ọkwa ọhụrụ na 2014. N’afọ ahụ, a kụrụ jackpots jackpots Mega Moolah ugboro isii, na ngụkọta ụgwọ ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde .S 15. Kemgbe ahụ, enweela ọtụtụ ndị mmeri kwa afọ. Ruo ugbu a, 2017 dị ka afọ kachasị elu maka ndị mmeri Mega Moolah, yana ndị egwuregwu iri na atọ kesara ihe karịrị € 50 nde.
Aha njirimara: MegaMoolah.com
Ihe ndekọ ndị ahụ dị egwu. Agbanyeghị, ezigbo ihe kpatara Mega Moolah ji adọta oghere ndị ọzọ jackpot na ntanetị bụ uru ya kacha elu. Na 2015, ọ setịpụrụ ndekọ maka nnukwu nkwụnye ego n’ịntanetị na akụkọ ntolite mgbe Jon Heywood si Cheshire meriri € 13.2 nde!
Mmeri ahụ nwetara Heywood na Microgaming otu ebe na Guinness Book of World Records. Mana, na 2018, ihe ndekọ ahụ mebiri ọzọ, oge a site na onye ọkpụkpọ na-enweghị aha. Onu ogugu € 18.9 nde jackpot ruru ihe ruru € 16.6 nde n’oge ahụ (dabere na 2018 EUR na GBP ọnụego mgbanwe) wee si na ntụgharị na-efu naanị 75 0.75.
Mega Moolah Jackpot Stats
Mkpụrụ Ọnụ Mkpụrụ = € 1 nde Nkezi mmeri = € 5.2 nde Nnukwu mmeri = € 18.9 nde Obere mmeri = € 1,01 nde Onyinye ugwo Nke ugboro = 44 ụbọchị Onyinye Ego Jacket = izu asatọ Onyinye Kasịnụ na Otu Afọ (dịka nke 2020) = 13
Ọgbọ ọzọ nke jackpot Jackpot Online: Mega Moolah Remakes
Ọdịdị na-adịgide adịgide nke ihe mbụ emeela ka nhọrọ nke Mega Moolah remake. Microgaming mbụ reboot bụ Mega Moolah Isis na 2009. Egwuregwu a gbasoro otu usoro ahụ dị na mbụ. Otú ọ dị, kama nke a Safari dabeere njem, egwuregwu a na-ewe gị Ancient Egypt ebe arịa, mummies, na Queens bụ na aka unlock kpọghee ekwt otu anọ na-aga n’ihu jackpots.
Ọsọ ọsọ na-aga 2020 na Absolootly Mad: Mega Moolah gara n’ihu n’ihe ndị bu ya ụzọ malitere. Oghere a nke oge a bụ ihe oriri nke Mad Hatter karịa njem Africa. Otú ọ dị, ikike ịkwụ ụgwọ na ịdị ebube nke ndị ọgbọ ya dị n’oge niile. N’ezie, ihe Absolootly Mad: Mega Moolah na-eme bụ iwere ntọala mbụ wee gbakwunye ụfọdụ ntụgharị oge a. Dịka ọmụmaatụ, mmeri ọ bụla na-amalite njirimara “rolling reels”. Ihe akara ohuru wee daba n’ime ebe ndi mmeri, nke putara na igha agbanye otu mmeri rue otutu mmeri.
Na mgbakwunye na ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ, Absolootly Mad: Mega Moolah nwere ọtụtụ ihe. Nke a pụtara na mmeri ọ bụla na-agagharị na-ebuli elu site na ịba ụba. I nwekwara ike ịkpalite usoro nke free spins ma ọ bụrụ na ị kụrụ atọ osisi ụzọ ma ọ bụ karịa. Agbanyeghị, iji nweta uru kasịnụ n’aka Absolootly Mad: Mega Moolah, ịkwesịrị ịmepee oghere ego. Dị ka nke mbụ Mega Moolah, a na-ebute wheel wheel jackpot na enweghị usoro.
Mgbe ahụ, n’ihi na Absolootly Mad: Mega Moolah na-ekerịta otu ihe nrite dị ka ndị ibe ya Mega Moolah, ị ga-egwu otu jackpots dị ka ị ga-eme na ndị ọzọ.
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, egwuregwu a bụ ụdị nke oge a Mega Moolah. Enwere ụfọdụ usoro ọhụụ ọhụụ – agbanyeghị, otu isi ihe ahụ mere ka ihe mbụ bụrụ ihe ka dị, na, dị mkpa, ị ga-egwu maka jackpots bara uru karịa € 1 nde.
Kpọọ Jackpot Ohere mepere Online Na LiveRoulette
E nwere ọtụtụ ohere mpere jackpot n’ịntanetị ma ọtụtụ n’ime ha nwere ike ịchọta n’ime ime ụlọ LiveRoulette Vegas. Agbanyeghị, n’ime egwuregwu niile dị ebe ahụ, Mega Moolah pụtara. N’agbanyeghị ma ị bụ onye ofufe nke mbụ ma ọ bụ otu n’ime reboots, egwuregwu a na-eduga n’ụzọ mgbe ọ na-abịa payout ikike na ntụrụndụ. Ọbụlagodi na ị merighị mega jackpot, enwere ike ijide n’aka na ị ga-enwe nnukwu oge mgbe ị na-egwu oghere Mega Moolah na LiveRoulette.
Banye ma ọ bụ mepụta akaụntụ na LiveRoulette iji nweta Mega Moolah na ọtụtụ ndị ọzọ nke kacha mma jackpot ohere mpere online.
Tags:akụkọ eme ihe Mega mere mmeri Moolah ndị
Nde Pound họpụtara Gameweek 34: Premier League + Championship
Crunch oge na Asọmpi Onye Mmeri. Obere obere Fight t …
Quickspin: Glyph ọla edo two (RTP: 96.09percent )
Golden Glyph two bụ usoro nke Quickspin’s Golden Glyph. Dị …
Online Ohere mepere Ndepụta Okwu Maka Beginners
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ntanetị n’ịntanetị …